Mg Thant: UNDP က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ၂၀၁၁၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးမှု ညွန်းကိန်း သို့မဟုတ် လူနေမှုဘ၀ အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံများစာရင်း
UNDP က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ၂၀၁၁၏ လူမှုဖွံ့ဖြိုးမှု ညွန်းကိန်း သို့မဟုတ် လူနေမှုဘ၀ အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံများစာရင်း
Human Development High Human Development Medium Human Development Low Human Development
1. Norway 48. Uruguay 95. Jordan 142. Solomon Islands
2. Australia 49. Palau 96. Algeria 143. Kenya
3. Netherlands 50. Romania 97. Sri Lanka 144. São Tomé and Príncipe
4. United States 51. Cuba 98. Dominican Republic 145. Pakistan
5. New Zealand 52. Seychelles 99. Samoa 146. Bangladesh
6. Canada 53. Bahamas 100. Fiji 147. Timor-Leste
7. Ireland 54. Montenegro 101. China 148. Angola
8. Liechtenstein 55. Bulgaria 102. Turkmenistan 149. Myanmar
9. Germany 56. Saudi Arabia 103. Thailand 150. Cameroon
10. Sweden 57. Mexico 104. Suriname 151. Madagascar
11. Switzerland 58. Panama 105. El Salvador 152. Tanzania
12. Japan 59. Serbia 106. Gabon 153. Papua New Guinea
13. Hong Kong 60. Antigua and Barbuda 107. Paraguay 154. Yemen
14. Iceland 61. Malaysia 108. Bolivia 155. Senegal
15. Korea (Republic of) 62. Trinidad and Tobago 109. Maldives 156. Nigeria
16. Denmark 63. Kuwait 110. Mongolia 157. Nepal
17. Israel 64. Libya 111. Moldova 158. Haiti
18. Belgium 65. Belarus 112. Philippines 159. Mauritania
19. Austria 66. Russian Federation 113. Egypt 160. Lesotho
20. France 67. Grenada 114. Palestinian Territory 161. Uganda
21. Slovenia 68. Kazakhstan 115. Uzbekistan 162. Togo
22. Finland 69. Costa Rica 116. Micronesia 163. Comoros
23. Spain 70. Albania 117. Guyana 164. Zambia
24. Italy 71. Lebanon 118. Botswana 165. Djibouti
25. Luxembourg 72. Saint Kitts and Nevis 119. Syria 166. Rwanda
26. Singapore 73. Venezuela 120. Namibia 167. Benin
27. Czech Republic 74. Bosnia and Herzegovina 121. Honduras 168. Gambia
28. United Kingdom 75. Georgia 122. Kiribati 169. Sudan
29. Greece 76. Ukraine 123. South Africa 170. Côte d'Ivoire
30. UAE 77. Mauritius 124. Indonesia 171. Malawi
31. Cyprus 78. Macedonia 125. Vanuatu 172. Afghanistan
32. Andorra 79. Jamaica 126. Kyrgyzstan 173. Zimbabwe
33. Brunei Darussalam 80. Peru 127. Tajikistan 174. Ethiopia
34. Estonia 81. Dominica 128. Viet Nam 175. Mali
35. Slovakia 82. Saint Lucia 129. Nicaragua 176. Guinea-Bissau
36. Malta 83. Ecuador 130. Morocco 177. Eritrea
37. Qatar 84. Brazil 131. Guatemala 178. Guinea
38. Hungary 85. Saint Vincent and
the Grenadines 132. Iraq 179. Central African
39. Poland 86. Armenia 133. Cape Verde 180. Sierra Leone
40. Lithuania 87. Colombia 134. India 181. Burkina Faso
41. Portugal 88. Iran (Islamic Republic of) 135. Ghana 182. Liberia
42. Bahrain 89. Oman 136. Equatorial Guinea 183. Chad
43. Latvia 90. Tonga 137. Congo 184. Mozambique
44. Chile 91. Azerbaijan 138. Lao 185. Burundi
45. Argentina 92. Turkey 139. Cambodia 186. Niger
46. Croatia 93. Belize 140. Swaziland 187. Congo
47. Barbados 94. Tunisia 141. Bhutan
၂၀၁၁ရဲ့ လူမှုဖွံ့ဖြိုးမှု ညွန်းကိန်း သို့မဟုတ် လူနေမှုဘ၀ အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံများစာရင်းကို UNDP က မနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ ဒီစာရင်းက ကမ္ဘာ့အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံ(Happy Planet Index) နဲ့ မတူပါဘူး၊ ဒါက လူမှုဘ၀၊ လူတွေရဲ့ နေထိုင်မှု၊ လူတွေရဲ့ အခွင့်အရေး၊ လူတွေရဲ့ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကို အကောင်းဆုံး၊ အလယ်အလတ်နဲ့ အနည်းဆုံး စသည်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ငံတွေရဲ့ အစဉ်အလိုက် ပြဇယားပါ။
ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ဗိုလ်စွဲတဲ့နိုင်ငံကတော့ ဒီနှစ်မှာ လူအစုလိုက် အပြုံလိုက် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ မနှစ်ကလည်း ထိပ်ဆုံးက နော်ဝေးပါပဲ။ နော်ဝေးဟာ လူအခွင့်အရေး အလွန်လေးစားလိုက်နာတဲ့ နိုင်ငံလို့ နာမည်ကြီးတဲ့အတွက်လည်း ထိပ်ဆုံးကဗိုလ်စွဲလေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါမယ်။
တခြားနိုင်ငံတွေအကြောင်း မပြောတော့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ အနီးစပ်ဆုံး အာဆီယံ နိုင်ငံတွေကို ကြည့်ကြရအောင်... အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါတဲ့နိုင်ငံရှိပါသလား... ရှိပါတယ်... စင်ကာပူနဲ့ ဘရူးနိုင်းပါ။ နှစ်နိုင်ငံလုံး လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်တဲ့နိုင်ငံပါ။ စင်ကာပူ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်မှု ဒါလေးတွေ အနည်းငယ်လိုတာကလွဲရင် ပညာရေး၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း စတာတွေ အငြင်းပွားစရာမရှိပါဘူး။ အဆင့် ၂၆ကတော့ သင့်တင့်တယ်ထင်ပါတယ်... မနှစ်က ၂၇ပါ၊ တစ်ဆင့်တိုးလာပါတယ်။ ဘရူးနိုင်းနိုင်ငံကတော့ ပြောစရာမလိုပါဘူး အေးချမ်းသာယာတဲ့ ဘုရင့်နိုင်ငံငယ်လေးပါ။ မနှစ်က အဆင့် ၃၇ကနေ ၃၄ထိတောင် တက်လာတဲ့ နိုင်ငံလေးပါပဲ။
မြင့်တဲ့နိုင်ငံထဲ အုပ်စုထဲမှာတော့ အာဆီယံထဲက တစ်နိုင်ငံတည်းပါပါတယ်။ မလေးရှားပါ... မလေးရှားနိုင်ငံအကြောင်း သိပ်တော့မသိပါ။ လူနေမှုအဆင့်အတန်း အဆင်ပြေပါတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ပညာရေး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စတာတွေတော့ မသိပါဘူး...
အလယ်အလတ်ရှိတဲ့ အုပ်စုမှာ... အများကြီးပါပါတယ်။ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ကမ္ဗောဒီယား.. အနည်းငယ်တော့ အံ့သြမိပါတယ်။ ထိုင်းက မြင့်တဲ့နိုင်ငံ အုပ်စုထဲကနေ ပြုတ်ကျသွားတာပါ။ အဆင့် ၆၆ကနေ အဆင့် ၁၀၃ထိ ကျသွားပါတယ်။ နောက် လာအို၊ ကမ္ဗောဒီးယားကလဲ အလယ်အလတ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံထဲပါနေတာပါပဲ... ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကလည်း သူတို့ ဘယ်လောက်ထိ တိုးတက်နေပြီးဆိုတာ သိပ်မသိတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ အာဆီယံနိုင်ငံထဲ တစ်နိုင်ငံတည်း ကျန်ပါတော့တယ်။ အုပ်စုကလည်း တစ်စုတည်း ကျန်ပါတော့တယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ... ဘယ်နိုင်ငံပါလိမ့်...ဘယ်အုပ်စုပဲ ကျန်ပါလိမ့်... ရင်ခုန်စရာကို မလိုအောင်ဘဲနော်.. နောက်ဆုံးအုပ်စု တိုးတက်မှုအနည်းဆုံးအုပ်စု... အာဆီယံမှာ နောက်အကျဆုံးနိုင်ငံ.. အားလုံး သိတော်မူသည့်အတိုင်း ကျတော်တို့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော မြန်မာနိုင်ငံတော် ပါပဲ... ဘာကြောင့်လဲ ပြောစရာမလိုတော့ပါ မြန်မာနိုင်ငံသူ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးအသိ။ စိတ်ဓါတ်တော့ မကျသေးပါ။ အနောက်မှာ နိုင်ငံ သုံးဆယ်ကျော် ကျန်ပါသေးတယ်။ ဘယ်သူပြောလဲ နောက်ဆုံးကနေရေရင် ထိပ်ဆုံးကနေပါ ပါတယ်လို့။ ဒီစာရင်းထဲ အမြင့်ဆုံးထဲမှာ မပါပေမယ့်... ပျော်ရွှင်ဆုံး နိုင်ငံစာရင်းမှာရော ဘူတန်နိုင်ငံလို့ ထိပ်ဆုံးကပါလားဆိုတော့လည်....
သို့ပေမယ့်လည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲပြောပြော လူသန်းပေါင်း ၅၀ကျော်ဟာ အဲဒီနိုင်ငံလေးကို ချစ်ဆဲ၊ ချစ်မြဲ၊ ဆက်ချစ်နေဦးမှာပဲဆိုတာတော့...
(မှတ်ချက် - UNDP က နိုင်ငံတွေကို အဆင့်သတ်မှတ်ရာမှာ ဒီနှစ်ကစပြီး ပုံသေနည်း အသစ်ပြောင်းထားပါတယ်.. ပြီးတော့ မနှစ်က အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံအချို့ကိုလည်း ဒီနှစ်မှာ ထည့်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနှစ်ကအဆင့်နဲ့ ဒီနှစ်အဆင့် ယှဉ်ရာမှာတော့ တသတ်မတ်တည်း မှတ်ယူလို့ မရနိုင်ကြောင်းပါ။ အသေးစိတ်ကို အောက်က ကိုးကားစာရင်းထဲမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သုံးသပ်မှုတွေအားလုံး ကျတော့် ကိုယ်ပိုင်အမြင်သက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။)
jasmine(တောင်ကြီး) November 3, 2011 at 1:19 PM
ဒါပေမဲ့ Top 10 နိုင်ငံတွေပါပဲ
မောင်မျိုး November 3, 2011 at 1:59 PM
တစ်နေ့တစ်လှမ်း ပုဂံဘယ်ရွေ့မလဲး))) ဖြေးဖြေးပေါ့တဲ့ ဦးသိန်းစိန် က ဟဟား
AH November 3, 2011 at 8:29 PM
ကွန်မန့်ရေးချင်ပေမယ့်........ စိတ်ထဲမှာ စာရင်းဖတ်ပြီးတော့ လုံးထွေးနေလို့ ဘာမှ မရေးတော့ပါဘူး ကိုမောင်သန့်ရယ်.... အဲ့ဒါလေး ရေးသွားတယ်နော်...
ညိမ်းနိုင် November 3, 2011 at 9:24 PM
စာရင်းကိုသေချာမဖတ်ရသေးခင်ကတည်းက ထင်ထားပါတယ် ကိုသန့်ရာ....
မီးမီးငယ် November 7, 2011 at 12:24 AM
ဆူးသစ် November 7, 2011 at 5:36 PM
ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ တကယ်ကို ဗဟုသုတဖြစ်စေလို့ပါ။ ကြိုးစားကြတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့လည်း နိုင်ငံသားပေကိုး။
8Yar November 7, 2011 at 10:16 PM
အစ်ကိုမောင်သန့် ရေ အခုလိုဗဟုသုတလေးတွေတင်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျာ။